Nnwom 25 NA-TWI - Akwankyerɛ ne ogye mpaebɔ - O, wo - Bible Gateway
Nnwom 24Nnwom 26
Nnwom 25 Nkwa Asem (NA-TWI)
25 O, wo Awurade na mebɔ wo mpae; 2 wo mu, me Nyankopɔn, na mahotoso wɔ. Gye me fi nkogu animguase mu. Mma m’atamfo ani mmmere me. 3 Wɔn a wɔde wɔn ho to wo so no nni nkogu, na mmom wɔn a wɔsɔre tia wo no.